Himalaya Dainik » बसन्त थापाले भने – मैले रविको बिरोध गरेको हैन, मलाई गाली गर्नुहुनेलाई धन्यवाद !
बसन्त थापाले भने – मैले रविको बिरोध गरेको हैन, मलाई गाली गर्नुहुनेलाई धन्यवाद !
बहुचर्चित लोकदोहोरी गीत ‘सालको पात टपरी’ अहिलेसम्मकै सर्वाधिक हेरिने लोकदोहोरी गीतहरु मध्य शिर्ष स्थानमा रहन् सफल गीत हो । गायक कुलेन्द्र बिश्वकर्मा र बिष्णु माझिको स्वरमा रहेको गीतले अहिले केही बिबाद पनि ल्याएको छ ।
नेपाल आइडल सिजन २ को बिजेता रवि ओडले अष्ट्रेलियाको एक सांगीतिक कार्यक्रममा उक्त गीत गाएका थियो । यहि बिषयलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न सकारात्मक नकारात्मक टिकाटिप्पणीको दोहोरी चलेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न शीर्षक राखेर वसन्त थापाले रवी वडमाथी गीत बिगारेर गाएको भन्दै आक्रोश पोखेको भनेर बिभिन्न समाचार आएपछि थापाले आफ्नो फेसबुक मार्फत एक आफ्नो बिचार राखेका छन् ।
बसन्त थापाको स्टाटस:
“हामी ( प्रलाद सुवेदी र बसन्त थापा) ले रवि ओड लाई बिरोध गरेको,हेपेको,चेतावनि दिएको भन्ने जुन भ्रामक शिर्षक सहितका समाचार प्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ हामि रवि जस्ता नव प्रतिभालाई सँधै माया गरेर सिकाएर वा सपोर्ट गरेर सफल भएका धेरै नव प्रतिभा हरू हजुर सामु लोकप्रिय हुनुहुन्छ रविलाई हाम्रो अनुरोध यो हो कि कम्तिमा हामी सबैको आईडल बनिसकेको गायकले सधै सबैले हेपेका चेपेका लोक गित होस् या आधुनिक सृजक लाई सम्झिदिए अथवा नसम्झेपनि गित गाउँदा अभ्यास गरेर गाएँ हुन्थ्यो भन्ने शुभेक्क्षा हो।
म पनि रविको शुभचिन्तकै हुँ रवि हामि सबै नेपालीको आईडल हुन उनले उपाधिको गरीमा राख्नु पर्छ यसकारण भनेको हुँ भन्ने भए सरस्वति लामा ज्यु लाई भन्थे नि ? कृपया गलत नबुझि दिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।तपाईहरूले गालि गरेर मेरो सहनशिलता बढाई दिनु भएकोमा गालि गर्नुहुने सम्पुर्ण लाई धन्यबाद दिन चाहन्छु” ।